Soo Saaraha Ugu Wanaagsan GJCNC-BP-50 | Gaoji
1. Xakameynta dhidibka: 3 dhidibka
2. Xoog wax soo saar: 500kn
3. Xawaaraha feedhka: 120HPM
4. Feejinta ugu badan: ∅32 (dhumucda≤12mm)
5. Xajmiga Maxbarbar: 6000 * 200 * 15 mm
Inta lagu guda jiro howsha qalabkani wuxuu si otomaatig ah u beddeli karaa qalabka, kaas oo si aad ah waxtar ugu leh gaar ahaan busbar dheer. Kuwa shaqeynaya ayaa ku dhinta maktabada qalabka, qalabkani wuxuu ku shaqeyn karaa busbar isagoo feeraya (daloolka wareega, godka dhaadheer iwm), muujinta, xiirashada, jeexitaanka, jarista geeska la buuxiyay iyo wixii la mid ah. Qalabka shaqada ee la dhammeeyey waxaa keenaya xamuulka.
Qalabkani wuxuu la jaan qaadi karaa CNC bender oo wuxuu samayn karaa khadka wax soo saarka basbar.
GJ3D / barnaamijyada barnaamijka
GJ3D waa softiweer caawimaad gaar ah u leh soo saarista basaska. Kaas oo awood u yeelan kara lambarka mashiinka barnaamijka, xisaabiya taariikh kasta oo la shaqeynayo, oo wuxuu ku tusayaa jilitaanka geeddi-socodka oo dhan kaasoo soo bandhigi doona isbeddelka busbar tallaabo tallaabo ah oo cad. Jilayaashani waxay kadhigeen kuwo ku habboon oo awood leh si looga fogaado koodh-gacmeedka murugsan ee ku qoran luqadda mashiinka. Waxayna awood u leedahay inay soo bandhigto howsha oo dhan ayna si wax ku ool ah uga hortagto waxyaabaha sababa wax ku biirinta qaldan.
Muddo sanado ah shirkaddu waxay hoggaanka u qabatay ku dabaqida 3D farsamada garaafka warshadaha wax soo saarka busbar. Hadda waxaan kuu soo bandhigi karnaa kontaroolka cnc ee ugu fiican iyo barnaamijyada naqshadeynta ee Aasiya.
Iskuxirka aadanaha iyo kombiyuutarka
Si loo soo bandhigo khibrad hawlgal oo ka wanaagsan iyo macluumaad waxtar badan leh. Qalabku wuxuu leeyahay 15 ”RMTP oo ah isku xirnaanta aadanaha iyo kumbuyuutarka. Qeybtaan waxaad kuheleysaa macluumaad cad oo ku saabsan geedi socodka soo saarida oo dhan ama qeylo dhaan kasta oo dhici karta oo aad ku maamuli karto qalabka hal gacan.
Inorder si loo abuuro qaab joogto ah, wax ku ool ah, sax ah iyo waqti dheer qaab dhismeed farsamo, waxaan doorannaa kubbadda saxda ah ee saxda ah, hagida toosan ee tooska ah ee Taiwan HIWIN iyo nidaamka servo ee YASKAWA oo lagu daray nidaamkeena laba isku xir. Dhamaan kuwan kore waxay abuurayaan nidaam gudbineed sida ugu wanaagsan ee aad ugu baahan tahay.
Waxaan soo saareynaa barnaamijka beddelka otomaatiga ah si aan uga dhigno nidaamka isku haynta mid wax ku ool ah gaar ahaan ka shaqeynta baararka dheer, sidoo kale waxay yareyn kartaa shaqada wadaha. U samee qiimo badan macaamiisheena.
Waxaa jira laba nooc:
GJCNC-BP-50-8-2.0 / SC (Lix feer, xiirid, cadaadis)
GJCNC-BP-50-8-2.0 / C (Sideed feer, xiirid)
Waad dooran kartaa waxaad u baahan tahay moodello
Xiga: Mashiinka CND Caaga Ulaabista Mashiinka 3D Laabista GJCNC-CBG
Aragti (mm) 7500 * 2980 * 1900 Miisaanka (kg) 7600 Shahaadada CE ISO
Awoodda ugu weyn (kw) 15.3 Danab gelinta 380 / 220V Isha Awoodda Haydarooliga
Xoog wax soo saar (kn) 500 Xawaaraha feedhka (hpm) 120 Xakamee dhidibka 3
Xajmiga ugu Weyn (mm) 6000 * 200 * 15 Maxay feedh Max 32mm (oo dhumucdiisuna waxay ka yar 12mm)
Xawaaraha Goobta(Dhidibka X) 48m / min Faalig dhuxul bini'aadanimo 45mm Meeleynta Ku-celcelinta ± 0.20mm / m
Garaaca Max(mm) X dhidibkaY dhidibkaZ dhidibka 2000530350 QaddarkaeeDhinto FeedhXiirashadaGelinta 6/81/11/0
Qaybaha Xakamaynta Qaybaha Gudbinta
PLC OMRON Tilmaamaha toosan ee toosan Taiwan HIWIN
Dareemayaal Schneider koronto Sax sax kubbada (taxanaha 4aad) Taiwan HIWIN
Badhanka Xakamaynta OMRON Kubad fiiqista taageerada Jabbaan NSK
Taabashada shaashadda OMRON Qaybaha Haydarooliga
Kumbuyuutar Lenovo Cadaadiska Sare ee Elektromagnetic Valve Talyaaniga
Xiriiriyaha AC ABB Tuubbada cadaadiska sare leh Talyaaniga MANULI
Wareegga Wareegga ABB Bamka cadaadiska sareeya Talyaaniga
Mashiinka Gawaarida YASKAWA Barnaamijka xakamaynta iyo barnaamijka taageerada 3D GJ3D (barnaamijka taageerada 3D ee loogu talagalay dhamaan shirkadeena)
Howl wade YASKAWA